အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်အကောင်းဆုံး DIY - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> ချစ်. ကစား
သင်ကနေရာလေးကိုယူပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင် DIY ဒါမှမဟုတ်မင်းလက်နဲ့လုပ်တာကိုနှစ်သက်တယ် ပြီးတော့မင်းရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဆောက်ဖို့ရှာနေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ငှက်များ၊ ခွေးများ၊ ကြောင်များ၊ ငါးများ၊ ကြက်များသို့မဟုတ်မည်သည့်တိရစ္ဆာန်များပင်ဖြစ်ပါစေ၊ သင်မယုံနိုင်လောက်အောင်စျေးပေါသောအရာများကိုပြုလုပ်နိုင်ရန် DIY စာရင်းတစ်ခုထားရှိပါသည်။
ကြောင်များ၊ ခွေးများ၊ ကြက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အစားအစာဖြန့်ဝေသူများကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသည်။ ဖန်တီးမှုနှင့်စုရုံးများနှင့်ငါးမွေးမြူရေးနှင့်၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းများ, etc
ပြီးတော့စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်သာမကပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်နှင့် hack လုပ်ရန်အတွက်လည်းသူတို့ကိုဒုတိယသက်တမ်းပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုပိုမိုအသုံးဝင်စေရန်နှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီပြုပြင်ရန်အတွက်ပါ။
todo DIY ၏ကမ္ဘာကြီး, ငါတို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ဝန်ဆောင်မှုမှာမိမိကိရိယာများနှင့်လှည့်ကွက်နှင့်အတူ။ နေ့စဉ်အရာဝတ္ထုများကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းကြိုးစားသည်။ ငါတို့မှာရှိတဲ့အရာကိုကြည့်ပါ
ဤအပိုင်းသည်အသံအတိုးအကျယ်ရှိလာသည်နှင့်အမျှသင်ခန်းစာများကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် (ခွေး၊ ကြောင်၊ ငှက်၊ ငါး၊ ကြက်) နှင့်အမျိုးအစား (အစာ၊ အစာစသည်ဖြင့်) ခွဲခြားပြီးအမျိုးအစားခွဲပေးပါလိမ့်မည်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ filter လုပ်ပါ၊
Hard drive ထဲမှ hamster wheel တစ်လုံးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ဒီနေရာမှာငါတို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းရှိသည် အဟောင်းကို hard drive ကို၏အားသာချက်ယူပါသူနှင့်အတူလုပ်နေတာ hamsters များအတွက်ဘီး။ ဒီ "နည်းပညာ" ဟမ်းစတားဘီးရဲ့စိတ်ကူးကအတွင်းနားမှာပြေးနေတဲ့ဟမ်းစတားရဲ့ဆူညံသံကကျွန်တော်တို့ကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေနိုင်အောင်တိတ်ဆိတ်အောင်လုပ်ဖို့ပါ။
သငျသညျလိုလျှင် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်၌အသံတိတ်ဟမ်းစ်ဘီးကို ၀ ယ်ပါ သငျသညျသူတို့အတော်လေးစျေးကြီးဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဒီ hack ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ hamster ကိုဆူညံသံမဖြစ်စေဘဲအလင်းအရှိန်ကို run နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ hard disk လိုအပ်လိမ့်မယ်။ အဲဒါက motor shaft ကိုထုတ်ယူရမယ်။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောစုဆောင်း ငှက်စာကျွေးသည့် မော်ဒယ်များ. သင်ဝယ်နိုင်သော လုပ်ငန်းသုံး မော်ဒယ်နှစ်မျိုးလုံးနှင့် အိမ်တွင် သင်ပြုလုပ်နိုင်သော အခြားအိမ်လုပ်များ။
သင်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ သားသမီးရှိသကဲ့သို့ သဘာဝတရားကို ချစ်မြတ်နိုးသူ. သင်သဘာဝတရားကိုနှစ်သက်ပါက ငှက်များ၊ သူတို့၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ၎င်းတို့၏သီချင်းများကို သင်ခံစားနိုင်သည်။ တိုက်ခန်းမှာနေရင်တော့ အရေးမကြီးပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဥယျာဉ်တစ်ခုထဲမှာ သင်က ပိုပျော်နိုင်ပေမယ့် သင့်ပြတင်းပေါက်မှာ feeders တွေထည့်ထားခြင်းအားဖြင့် သင်လည်း ၎င်းကို ကူညီပေးနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင့်တွင် ကလေးရှိပါက၊ သင့်ဒေသတွင်ရှိသော မတူညီသောငှက်များ၊ ၎င်းတို့စားသည့်အရာ၊ မည်သည့်အကောင်များကို ကျွေးနိုင်သည် စသည်ဖြင့် စူးစမ်းလေ့လာရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ့အစာမှာ ငှက်တွေ ကိုက်စားနေတာကို မြင်လိုက်ရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာဟာ တကယ့်ကို ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုပါပဲ။
ငှက်များကို မွေးမြူရန်အတွက် အသိုက်အကွက်များဖြင့် ဖြည့်စွက်စာကျွေးနိုင်သည်။. ဒါပေမယ့် ဒါက ပိုရှုပ်ထွေးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီး နောက်ဆောင်းပါးမှာ အသေးစိတ်ဖော်ပြမယ့် အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။
ငါးမွေးမြူရေးအတွက်အိမ်လုပ် CO2 မီးစက်ပြုလုပ်နည်း
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ငါးမွေးမြူရေးအတွက်အိမ်လုပ် CO2 မီးစက်ပြုလုပ်နည်း.
CO2 မီးစက်ကိုအပင်များအလင်းပေါင်းစည်းစေခြင်း၊ အရှိန်မြှင့ ်၍ လျင်မြန်စွာမျိုးပွားခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် PH လျှော့ချသူအဖြစ်လည်းအသုံးပြုသည်။
ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သော CO2 အတွက်သကြား၊ သဘာဝတဆေး (ဓာတုပစ္စည်းအချို့ပါဝင်သောတော်ဝင်တဆေး) နှင့်ရေစက်ရေကိုသာထုတ်လုပ်သည်။
အထောက်အပံ့ကို Coca-Cola ၏ပုလင်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။